Webiga Weyn (GRG) wuxuu dhiirigeliyaa, wuxuu keenaa bulshooyinka Minnesota degan si loo ilaaliyo oo loo daryeello dhulka iyo biyaha nolosheena.
Taageerada McKnight Foundation ee Wabiga Greening ayaa muhiim u ah hirgelinta habka deegaanka, hogaaminta beesha si loo yareeyo wasakheynta beeraha ee biyaha lagu beegsado. GRG waxay sameysey qaab ka mid ah Seven Mile Creek, halkaas oo horeba GRG ay u sameysey 320 qof oo mulkiilayaasha ah, waxay ku rakibeen 71 dhaqanno dhaqan-ilaalin ah - oo saameeyay in ka badan 2,100 acres aagga daadinta - waxayna dhamaysteen sahanno, qiimayn bulsho, iyo seminaaro si loo dhexgeliyo beeraleyda iyo daneeyayaasha kale aragti loogu talagalay biyaha.
Tan iyo markii ay bilaabeen 1995, Great River Greening waxay ku hawlan yihiin in ka badan 25,000 mutadawiciin ah oo mashaariic ah oo ku saabsan mashaariicda dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay oo ilaaliya degaannada muhiimka ah ee dhuleed waxayna saameyneysaa tayada biyaha.
Webiga Weyn Weyn Cagaarsho ayaa ah in la arko dhul caafimaad iyo biyo caafimaad oo ku yaal Minnesota. Caqabadaha waa mid halis ah: xayawaannada la jajabiyey, sii kordhaya oo ku sii badanaya aagag kala duwan oo ku yaal aagaggeena dabiiciga ah, baabi'iyeeyaha pollinators, iyo xiiso yaraanta dhalinyaradayada dibadda ah.
Iyadoo hogaamiyaha gobolka ee dib u soo celinta beesha, waxay fahamsan yihiin in dadka ku mashquulsan inay muhim u yihiin farsamooyinka dib-u-cusbooneysiinta deegaanka dabiiciga ah.
Tan iyo bilowgii 1995, GRG waxay la shaqeeynayeen 40,000 oo mutadawiciin ah si ay u hagaajiyaan kaymaha, jilicsanaanta, meelaha qoyan, iyo xeebaha. Dhaqaatiirta khibradda leh ee khibradda leh waxay ka shaqeynayeen in ka badan 350 goobood oo ku baahsan gobolka oo dhan, iyada oo la adeegsanayo hababka cusub, sida daaqsiga xayawaanka iyo kor u qaadida habka pollinator habitat.